Cilmi-baadhayaashu waxay ogaanayaan hannaankii hore ee xayawaanka ee 45 gacanta - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Cilmi-baadhayaashu waxay heleen qalab qadiimi ah oo xayawaan ah 45 gacanta - BGR
Maanta badda dhexdeeda waxaa ka buuxa xayawaan iyo waxyaabo qariib ah, kuwaas oo intooda badani ay u muuqdaan kuwo gebi ahaanba aan la fahmi karin haddii aynaan ka baranin da'da yar. Tusaale ahaan dhar qabow. Haddii aan laguu barin inaad ilmo tahay, waxay u muuqan lahaayeen adduun kale markaad ugu dambeyntii aragtay.
Isla sidaas oo kale ah noocyada dheer ee bakhtiga ah ee ku nool dhulka Earth. Hadda, helitaan cusub ayaa muujinaya jiritaanka abuuritaan aad u muuqda oo ka soo jeeda dunidii hore, isla markaana wuxuu la barbardhigi karaa shayga xun ee HP Lovecraft.
Koox caalami ah oo cilmi-baadhayaal ah, oo ay ku jiraan ruuxyo Yale oo ka soo jeeda Imperial College London, Oxford, iyo hay'ado kale, waxay aqoonsadeen noocyo cusub oo ah xeebta badda ah oo ku dul burburay dhulka badda boqolaal milyan oo sano ka hor.
Waxaa jira hal taako yar oo ka mid ah abuurka hadda loo yaqaan Sollasina cthulhu laakiin magaciisu wuxuu soo jeedinayaa waxa uu u ekaa intuu noolaa.
Maadaama cilmi-baadhayaashu ay sharxi doonaan maqaal cusub oo lagu daabacay Talaabooyinka loo yaqaan 'Society Society' B S. cthulhu waxaa gabi ahaanba la qariyay "hub" oo u eg tiyaatooyin. Ma aha shan ama toban qalab, laakiin 45 xubno shakhsiyadeed oo aqoonyahanno ah ayaa rumaysan in hadda loo isticmaalo in lagu raadiyo hoosta baddaha iyagoo raadinaya cunto iyo badbaado. 19659002]
Xayawaanku wuxuu la xidhiidhaa dabiicadaha casriga casriga ah sida qajaarka badda, ciriiriga badda iyo dabeecada kiniisadda, laakiin waxay leedahay sifooyin gaar ah oo si cad u kala soocaya. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya S. cthulhu iyo noocyada la midka ah ee aynu maanta aragno waa xayawaanka qadiimiga ah ee xubno hubaysan, halka dabbaasha iyo qajaarka ay "dhaansadaan" addimada.
Sababtoo ah xajmigiisu yar yahay, shaqadooda CPU waa qiyaastii hal inch in dhexroor. runtii ma ahayn in lagu arko aragti cabsi leh bada hore. Uma maleyneynin inuu khatar ku yahay xayawaanka badda oo laga yaabo inuu inta badan noloshiisa ku qaato cunnooyin yaryar oo cunno ah si uu isaga ilaaliyo, halka uu jirkoodu jilicsanaa uu ka caawiyay inuu la dagaallamo ugaarsadayaashiisa. 19659010] Sawirka Source: Elissa Martin, Qaybta Invertebrate Qaybta Paleontology, Yale Peabody Museum of History History